Villages Get Electricity from $2.6 Million Solar Plant | Myanmar Business Today
HomeBusinessVillages Get Electricity from $2.6 Million Solar Plant
Villages Get Electricity from $2.6 Million Solar Plant
Eight villages in Yesagyo Township, Magway Region now have access to electricity thanks toa$2.6 million solar power plant funded by the World Bank, Parami Energy Group of Companies and local villagers.
The World Bank provided $1.6 million for the project and the rest of the funding came from Parami Energy and local villages.
Parami Energy, Mega Global Green Automation and the Department of Rural Development jointly implemented the project.
“Children from eight villages in Yesagyo Township will have light at night for them to study, brightening their future,” U Myo Myint, senior energy expert at the World Bank, said. “And their parents can work in light increasing their income. Moreover, schools, clinics, monasteries and lamp posts are now lit thanks to this project.”
The small-scale power plant, which uses German technology, produces 288 kilowatts at peak capacity usinga160 kilowatt diesel generator.
“Having access to power is very beneficial to local people,” said U Ye Naung, president of the Village Electrification Committee. “They can operate small-scale businesses such as molding and welding. We also hope that this plant can help local people produce finished products. We, the local people, never thought that we will be able to use electricity one day. So this isasuccess story.”
The plant will supply power around the clock to 1,442 households in eight villages: Ngatayaw, Myay Daw, Thabyay, Bizupkone, Kine, Myayson, Nyaung Hmwe and Sethit. The power rate is K300 per unit.
“The Union government is trying to provide electricity to the whole country by 2030. We have 10 more years to meet that goal, with 50 percent of the population now having access to the power grid. This project is helping the National Electrification Plan,” said Anton Safronov, chief commercial officer of Parami Energy Group of Companies.
There are 48 villages in island area between the Chindwin and Ayeyarwady rivers and eight of them now have access to electricity. Parami Energy will implement more power projects to supply electricity to 31 out of the remaining 40 villages in the area. It will also implement development projects for 2,655 households in 23 villages in the second quarter of 2020.
Energy projects such as mini-grid construction, renewable-energy and village electrification schemes are needed to meet power demand in Myanmar.
အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂.၆သန်းကျော် အကုန်ကျခံကာ ကျေးရွာ၈ရွာကို ဆိုလာစနစ်ဖြင့် လျှပ်စစ်မီး အသုံးပြုနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ရေစကြိုမြို့နယ်အတွင်းရှိ ရေလယ်ကျွန်းဒေသမှာ ကျေးရွာ ၈ရွာကို ဆိုလာစနစ်ဖြင့် လျှပ်စစ်မီးဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ရန်အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂.၆သန်းကျော် အကုန်ကျခံကာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း ပါရမီစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီများ အုပ်စု၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
ကျေးရွာ ၈ရွာ လျှပ်စစ်မီးရရှိစေရန် ကုန်ကျငွေ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂.၆သန်းကျော်၏ ၆၀%ကို ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှာ ကူညီပေးခြင်းဖြစ်ပြီး ကျန်ရှိသည့် ၄၀%ကို ပါရမီစွမ်းအင်နှင့် ကျေးရွာပြည်သူများမှ ၂၀%စီ အသီးသီးထည့်ဝင်ကာ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ပါရမီစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီများ အုပ်စု၊ Mega Global Green Automation(MGGA) ကုမ္ပဏီနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနတို့မှ ပူးပေါင်းကာ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ရေစကြိုမြို့ ရေလယ်ကျွန်းမှာရှိတဲ့ ကျေးရွာ ရှစ်ရွာမှာ ဒီနေ့ကစပြီးတော့ ကလေးငယ်တွေဟာ လျှပ်စစ်မီးနဲ့ စာကြည့်နိုင်ပါပြီ။ သူတို့ရဲ့ အနာဂတ်ဟာလည်း လျှပ်စစ်မီးလိုပဲ ထွန်းလင်းတောက်ပလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကလေးတွေရဲ့ မိဘတွေဟာလည်း လျှပ်စစ်မီးကို အသုံးပြုပြီးတော့ ဝင်ငွေပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အလုပ်တွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကျေးရွာတွေမှာရှိတဲ့ စာသင်ကျောင်းတွေ၊ ဆေးပေးခန်းတွေ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေနဲ့ လမ်းမီးတွေဟာ လျှပ်စစ်မီးတွေနဲ့ ထိန်ထိန်ညီး ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်” ဟု ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ အကြီးတန်း စွမ်းအင်ပညာရှင်ဖြစ်သူ ဦးမျိုးမြင့်က ပြောသည်။
ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး အသေးစားဆိုလာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရုံသည် ဂျာမနီ နည်းပညာကို အသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းဓာတ်အားပေးစက်ရုံမှ လျှပ်စစ်စွမ်းအားပမာဏ ၂၈၈ ကီလိုဝပ်ပိ(ခ) (288 kilo watt peak)ကို ထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်ပြီး အရန်အဖြစ် ၁၆၀ ကီလိုဝပ် (160 kW) ပမာဏရှိ ဒီဇယ်ပါဝါမီးစက်တစ်လုံးကို ထားရှိပေးထားကြောင်း သိရသည်။
“ဒီလိုမျိုး လျှပ်စစ်မီးကို ရရှိခဲ့တာကြောင့် အကျိုးကျေးဇူး များပါတယ်။ တွင်ခုံလုပ်ငန်းတွေ လည်ပတ်နိုင်ပြီ။ သံဂဟေဆက်လို့ရတယ်၊ နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ကျေးလက်က ထွက်ရှိတဲ့ တောင်သူထုတ်ကုန်တွေကို ကုန်ချောအထိ ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ မျှော်မှန်းထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ ရေလယ်ကျွန်းဒေသအနေအထားနဲ့ အခုလို လျှပ်စစ်မီးရရှိတာဟာ လုံးဝမမျှော်လင့်ခဲ့တာကို အောင်မြင်တယ်လို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ကျေးရွာမီးလင်းရေးကော်မတီ ဥက္ကဌဖြစ်သူ ဦးရဲနောင်က ပြောသည်။
ဓာတ်အားပေးစက်ရုံမှ လျှပ်စစ်စွမ်းအားပမာဏ ၂၈၈ ကီလိုဝပ်ပိ(ခ) (288 kilo watt peak)ကို ထုတ်လွှတ်မည်ဖြစ်သည့်အတွက် ကျေးရွာ ၈ရွာဖြစ်သည့် ငတရော်၊ မြေတော်၊ သပြေပင်၊ ဘိစပ်ကုန်း၊ ကိုင်း၊ မြေစွန်၊ ညောင်မွှေး၊ ဆည်သစ် စသည့် ကျေးရွာများမှ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၁၄၄၂စု မှာ ဆိုလာစနစ်ဖြင့် ၂၄နာရီ လျှပ်စစ်မီးအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
“ပြည်ထောင်စုအစိုးရအနေနဲ့ ၂၀၃၀ ခုနှစ်မှာ တစ်နိုင်ငံလုံးလျှပ်စစ်မီးရရှိဖို့အတွက် ကြိုးစား ပန်းစားအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ အချိန်ပြည့်မှီဖို့က နောက်ထပ် (၁၀) နှစ်ကျန်နေသေးပြီး တစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့ (၅၀) ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ လျှပ်စစ်မီးရရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်၊ ဒီနေရာမှာ ပြင်ပမဟာဓာတ်အားလိုင်းတွေက ဝေးလံခေါင်သီတဲ့ ကျေးလက်ဒေသတွေကို ဖြတ်သန်းတည်ဆောက်ဖို့က အခက်အခဲဖြစ်နေပြီး ကုန်ကျစရိတ်လည်း အင်မတန် များပြားပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုလို ဒီလိုမျိုး မဟာဓာတ်အားလိုင်း ရောက်ရှိဖို့ ခက်ခဲတဲ့ ရေစကြို ရေလယ်ကျွန်းဒေသကို အသေးစား ဆိုလာလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရုံကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တာဟာ အစိုးရရဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံး လျှပ်စစ်မီးလင်းရေး အစီအမံကို ပံ့ပိုးပေးရာရောက်ပါတယ်” ဟု ပါရမီစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီများအုပ်စုမှ Chief Commercial Officer (EVP) ဖြစ်သူ Anton SAFRONOV က ပြောသည်။
ရေလယ်ကျွန်းဒေသတွင် ကျေးရွာပေါင်း ၄၈ရွာရှိပြီး ယခုစီမံကိန်းကြောင့် ကျေးရွာ (၈) ရွာ လျှပ်စစ်မီးရရှိပြီဖြစ်ရာ ထပ်မံ၍ ကျေးရွာပေါင်း (၄၀) က လျှပ်စစ်မီးရရှိရန် လိုအပ်လျက်ရှိသည်။
ထို့ကြောင့် ပါရမီစွမ်းအင်ကုမ္ပဏီများအုပ်စုအနေဖြင့် ကျန်ရှိသည့် ကျေးရွာ (၄၀) အနက် ကျေးရွာ (၃၁) ရွာရှိ အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၄၀၉၇ အိမ်အား မီးလင်းရေးစီမံကိန်းအား ကြိုးစားအကောင်အထည်ဖော်သွားရန် ရည်မှန်း ထားရှိထားကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင် နောက်ဆက်တွဲ အကောင်အထည်ဖော်မှုအနေဖြင့် ပါရမီစွမ်းအင်မှ လာမည့် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒုတိယ သုံးလပတ်တွင် ကျေးရွာ (၂၃) ရွာရှိ အိမ်ခြေပေါင်း ၂၆၅၅ အိမ်အား ဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံကိန်းများ လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ရန် မျှော်မှန်းထားကြောင်း သိရသည်။
ပါရမီစွမ်းအင် ကုမ္ပဏီသည် စီးပွားရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အသေးစားလျှပ်စစ်ကွန်ယက် (mini grid)၊ ပြည့်ဖြိုးမြဲ စွမ်းအင်နှင့် ကျေးလက်ဒေသမီးလင်းရေး လုပ်ငန်းများအပါအဝင် ကြီးမားသော စွမ်းအင်စီမံကိန်းများ လိုအပ်လျက်ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံ၌ စွမ်းအင်လိုအပ်ချက်များကို ဖြေရှင်းရာတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
Previous articleMyanmar Opens 46 CNG Stations
Next articleYangon Chief Calls for Creation of Gems and Jewelry Market